समाजको यथार्थ बोल्ने छोटो फिल्म घेरो सार्वजनिक (भिडियो) – NepalayaNews.com
समाजको यथार्थ बोल्ने छोटो फिल्म घेरो सार्वजनिक (भिडियो)
१७ आश्विन २०७७, शनिबार १५:०५
कोरोना कहरले समाजमा फरक खालको घेरो सृजना गरेको छ । जुन घेरोले समाजका फरक वर्गबीचविभेदको खाडल झन् बढाएको छ । यस्तै कथामापोखराकाफिल्मकर्मी नेत्र गुरुङले छोटो फिल्मनिर्माण गरेका छन् ।
फिल्मको नामनै ‘घेरो’ राखेर उनले कोरोना कहर, लकडाउनको असर र समाजमात्यसको प्रभाव देखाउनखोजेका छन् । विशेषगरि एउटा अबोध बालकको मनोविज्ञानमार्फत समाजको यथार्थ उनले फिल्ममा पस्केका छन् ।
लकडाउन भएसँगै पोखरामा रहेर समाजकाविभिन्न पाटोहरुलाई समेटेर छोटो फिल्मनिर्माण गर्दै आएका नेत्रको यो पछिल्लो कामहो । निम्नवर्गको विपन्न परिवारमा जन्मिएर हुर्केको एउटा बालकले कोरोनाबाट बच्नकालागि एउटा मास्कप्राप्त गर्ने सँघर्षको कथा नै घेरोको मुलकथाहो । यद्यपिफिल्मले समाजको यथार्थलाई पनिउत्तिकै गहिरो रुपमा देखाउन खोजेका छ ।
‘लकडाउनले समाजमा एउटा छुट्टै घेरो निर्माण गरेको छ र त्यही घेरोले मानिसहरुबीच फरक छुट्याएको छ ।’फिल्मकानिर्देशक नेत्र गुरुङले भने–‘मेरा अघिल्ला लकडाउनसम्बन्धि फिल्महरुको तुलनामा यो फिल्मलाई केही फरक रुपमाभन्नखोजेको छु । बालकको मनोविज्ञानमार्फत समाजको यथार्थलाई मैले देखाउनखोजेको छु ।’फिल्ममाउनले व्यवसायिककलाकारहरुभन्दापनि समाजकै ‘रियल लाइफ’चरित्रहरुलाई अभिनय गराएका छन् ।
कास्कीको ढिकुरपोखरीमा छायाँकन गरिएको फिल्ममातितस केसी मूख्य भुमिका छन् । फिल्मअभिनयतितसकालागि नौलो कुरा थियो । उनको यो पहिलो फिल्महो । ढिकुरपोखरी गाउँकै स्थानियतितसको अभिनयअहिले धेरैले रुचाएका छन् । फिल्ममा उनीसँगै राजेन्द्र अधिकारी, विजय अधिकारी, उर्मिला केसी र कर्णबहादुर पुन देखिएका छन् । उर्मिला र कर्णब हादुरका लागि पनि फिल्म अभिनय पहिलो अनुभव हो ।
फिल्म घेरो नेत्र इन्टरटेनमेन्टको अफिसियल युट्यु बच्यानलमार्फत सार्वजनिक भएको हो । फिल्मलाई छोटो समयमै उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिलेको छ । फिल्मलाई प्रकाश गुरुङ ‘काश’ले खिचेका हुन् । विकास ताम्राकारले ड्रोन सट खिचेका हुन् भने फिल्मको रंग सँयोजन किरण राज थापाले गरेका हुन् । फिल्मको ब्याक ग्राउण्ड स्कोर बिनोद रसाईलीले गरेका हुन् भने पब्लिसिटी डिजाइन सबिन गायकको हो ।
“बन चरिलाई काफलु दाना” बोलको लोक दोहोरी गित सार्वजनिक (भिडियो)	३ बैशाख २०७८, शुक्रबार १४:३७
‘मेरो शैलुङ गाउँ’ वैशाख ४ गते विमोचन हुने	२९ चैत्र २०७७, आईतवार १८:३४
लोकदोहोरी प्रतियोगितामा स्याङजालाई हराउँदै बागलुङ विजयी	१ चैत्र २०७७, आईतवार १५:०७
अभागी किम : दोस्रो विवाह पनि राम्रो नभएपछि डिभोर्सको तयारी गर्दै…	१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १६:०५
गुरुङ फिल्म अब नियमित रुपमा चलचित्र हलमा प्रदर्शन गरिने (कुन फिल्म कहिले प्रदर्शन हुँदैछ ?)	११ माघ २०७७, आईतवार १४:५३
विश्‍वराज बास्तोला वोर्ड सदस्य मनोनयन । १७ आश्विन २०७७, शनिबार १५:०५
ज्ञान, बुद्धि विवेक र संघर्षका सागर बुद्धिसागर १७ आश्विन २०७७, शनिबार १५:०५
अफगानबाट फिर्ता हुँदै अमेरिकी सेना, हलो कहाँ अड्कियो ? १७ आश्विन २०७७, शनिबार १५:०५